I-Archive Yezinsizakalo - Izakhiwo Nezindlu ze-NJ & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Ikhaya / Imisebenzi
Singakusiza ulungiselele umyolelo, kanye ne-thato yokuphila / umhlahlandlela wezokwelapha osezingeni eliphezulu, noma udale ukwethenjwa ukuvikela impahla yakho. Abameli bethu be-New Jersey Probate bazokusiza njengomphathi wefa oliphethe. Sizosebenzisana nalabo abazuzayo esikhundleni sakho, futhi siphathe abanikeli bempahla uma udinga usizo.
Le nkampani yasungulwa ukusiza ukusindisa izindlu zabantu ekubonakaleni. Abalingani bethu bonke bagxila ekuzivikeleni ekumboneni e-New Jersey noma eNew York. Siyaqonda amathuba aphambili wokuxazulula isambulela sisebenzisa icala, ukuguqulwa kwemalimboleko, ukuqothuka noma ukuthengisa / ukuthengiswa okufushane. Sisebenza nabantu ukuthenga nokuthengisa izakhiwo. Singachaza ama-nuances omthetho kanye nendlela eyodwa yalezi zinhlelo esebenzisana ngayo. Ukukhuluma nommeli namuhla ngezinketho zakho kungasusa isisindo sokukhathazeka esifubeni sakho.
Ukubonisana nomphakathi, noma ukubonisana nje, kuyinqubo yokulawula lapho umbono womphakathi ezindabeni ezithinta bona ufunwa khona. Izinhloso zayo ezinkulu ukuthuthukisa ukusebenza kahle, ukucaca kanye nokuzibandakanya komphakathi.
Uma udinga ummeli eNew Jersey noma eNew York, ngoba ubekwa icala noma ufuna ukumangalela umuntu othile, xoxa nelinye lama-attornies ethu ngezinketho zakho. INew Jersey neNew York banezinhlobo ezihlukile zezinkantolo zezindaba ezihlukile.
ENgilandi, umthwalo wobufakazi ezinkambisweni zombango uvame, lapho kunemibandela eminingi njengokuqulwa kwecala lokudelela umphakathi, ubufakazi ekulinganiselweni kwamathuba. Ezimweni zomphakathi kuma-Maldives, umthwalo wobufakazi udinga
Umthetho wobulelesi yiqembu lomthetho elihlobene nobugebengu. Ilawula ukusebenza kwezenhlalo futhi ibhala noma yini esongela, eyingozi, noma engabeka engcupheni impahla, impilo, ukuphepha kanye nenhlala-kahle yabantu. Kubandakanya nesijeziso
I-Arbitration, uhlobo lokuxazululwa kwezingxabano (i-ADR), kuyindlela yokuxazululwa kwezingxabano ngaphandle kwezinkantolo. Amaqembu empikiswaneni ayidlulisela ekulameni komuntu oyedwa noma abaningi (“abahluleli”, “abahluleli” noma “ogwebayo”
Ithuluzi lezomthetho yigama elisemthethweni lobuciko elisetshenziselwa noma imuphi umbhalo obhalwe ngokusemthethweni owenziwe umlobi walo, amarekhodi futhi uveze ngokusemthethweni isenzo, inqubo, noma umsebenzi wesivumelwano, noma isibopho
Isixazululo Sokuxazululwa Kwempikiswano Yezentengiso
Ukulungiswa kwengxabano yinqubo yokuxazulula izingxabano phakathi kwamaqembu.Uhlelo lwezomthetho luhlinzeka ngezisombululo zezinhlobo eziningi zezingxabano. Abanye abaphikisayo ngeke bafinyelele esivumelwaneni ngenqubo yokubambisana. Ezinye izingxabano zidinga i
Umshuwalense uyindlela yokuvikelwa ekulahlekelweni yimali. Kuyindlela yokuphatha ubungozi esetshenziselwa ukuhlanganisa umngcele wobungozi bokubhekelwa phansi, okungaqiniseki ngokulahlekeleka.